PHP Mailer Anouraya webhusaiti yeminiti musingaverengi nenyaya ino «ITS
Rimwe risina kukodzera kuvharidzirwa kwekodzero kusachengetedzwa kwakaitwa PHPMailer, chimiro pakati pe mossycup oak yakashandiswa zvikuru yePM email kutumira makiraibhurari, Zvingaisa mamiriyoni emasayiti Injodzi yekuda kutengesa.
Kusakwana kunogona kunge kwawanikwa kuGood An muchengeti wezvokuchengetedza ainzi Dawid Golunski Ndezvipi zvimwe kutanga kugadzirisa kungave kwakanyorwa muFPMailer 5. 2. 18, iyo inogona kunge yakabudiswa musvondo. Zvisinei, zvinowanzoitika kuti patavium inogona kunge isina kukwana Kuwedzera kunogona kupfuurira.
Bhuku reHIMPMailer rinogona kushandiswa zvakananga nekushandurwa Pakupedzisira Tom anoshandisa purogiramu yakawanda yehuwandu hwehupfumi hwehupfumi (CMSs) kusanganisira WordPress, Joomla Uye Drupal. Nzvimbo iyo raibhurari ingasave yakabatanidzwa Pamberi payo, nhamba yavo yepakati, ichave yakanakira kufambira mberi pamusoro pekufananidzira Modemu yakasiyana yega inogona kuiswa mumatongerwo evanhu vatatu-add-ons.
Pamusana peizvi, izvo zvinokanganisa zvinyorwa camwood zvakasiyana kutanga newebsite newebsite. Semuenzaniso, iyo kubatana kwaJoomla kuchengetedzwa kwakareva kuti avo Joomla JMail class, iyo inotarirwa kamwechete PHPMailer, inoda kuvimbiswa kwepamusoro kwakagadzirirwa kugadzirisa kushandisa kusadzivirira kusina musoro.
Kusakwana kunotanga Kutarisana nekusagadziriswa kwekutsvaga kwekombiyuta yekombiyuta yeruzivo Zvimwewo zvinogona kubvumira munhu anomanikidza achaunza mairairo ayo anogona kuurawa pane web server mukati mekutumira sendmail project.
Zvisinei, kushungurudzwa kukuru kunobatsira avo vari pedyo nehutano hwehutano pawebsite yekuti mapurisa PHPMailer anotumira mameseji Anobvumirawo kuisa nzvimbo ye email yevatumi - nzvimbo iyo inowanikwa iri kubva kumusoro we email. Yaro isinganzwisisi kuti nguva dzakadaro zvirongwa ndezvipi, pamusana pekuratidzwa kwewebhu kunounza email yekutumira predefined Uyewo zvakanyanya kubvumira vatengi vanofanira kuzivisa ma email avo Saizvozvowo seAnobatsira.
"Nzvimbo dzose dziri pakati pe Joomla API dzinotumira mameri kushandisa kero yevatumi yakagadzirirwa kuiswa kwepasi rose zvakare haifungi nezvekodzero dzevatengi dzinofanira kuva mukana kune imwe nzvimbo," hurumende ye Joomla yekubatana yakataura nezvehupoti. "Zvisinei, zvinyorwa zvinoshandiswa pakutevedzana Zvimwe zvakasiyana-siyana zveFPMailer zvisiri izvo hazvishandisi Joomla API nekutumira email kunogona kutadza kudzivirirwa kana izvi zvichiitika. ".
Vashanduri ve WordPress vakasvika paAkufananidza kugumisa, vachicherechedza ivo pachavo bug tracker kuti mukati wp_mail () basa rinoshandiswa Kudivi reSpanish WordPress ringasakanganiswa naro harishandisi simba risina simba reFPMailer. Chechitatu-party plug-ins iyo inoshandisa wp_mail () inobudirira inofanirwa kufungidzira kuti haifaniri kutungamirirwa, kunyange zvakadaro kuenderera kune mamwe mapurgi anogona kunge ikozvino panguva yekuongorora.
"The 4 inoswedera. 7. 1 kusvika ichatora zororo rakakura pamibvunzo iyi, "WordPress lead designer Dion Hulse akati. "Takatumirwa nekutumira mabhuku mabhuku eSpressPress chete-chero ipi zvayo kana tikashandisa unhu kana kwete. ".
Drupal boka rekuchengetedza rakagadzirisawo Nyaya yezvokuchengetedza yeiyi nyaya Chii chatinowedzera kuchitarisa icho chakakosha, pasinei nokuti Drupal centre code haizotungamirirwi Pakupedzisira Tom anoshandisa kukanganisa uku.
"Kutaurirwa kushamisa kwekutsvaga kwenyaya iyi uye nguva yekusunungurwa kwaro isu tiri kubudisa bhuku guru rehuwandu hwehuwandu hwemashoko nekuchenjerera kunogona kukanganisa Drupal site vanochengetedza," iyo kubatana kwakataurwa.
Pamuganhu wekugadzirisa camwood inofanira kupararira uye huwandu hwehuwandu hwese hwekushandisa zvisina kunaka hunogona kuwanika, izvo zvidziviriro zvinoda zero-zuva mamiriro ezvinhu - zvicharatidzwa pachena uye zvisingatauri. Uyezve, zvinokonzerwa nemigumisiro iyo iyo inopesana kubva kune webhusaiti kusvika kune webhusaiti, kuvimba pane kuti PHPMailer inogona kushandiswa sei, hakusi nyore kutaura kune webmasters kunozobvisa nyaya yacho pasina kuongorora kwakanyatsonaka.
Achifunga kuti vanoshandisa PHPMailer zvakananga Kare, kero yavo yepawebsite, vanofanira kufonera mabhuku echechi yakapedzisira kugadziriswa nokukurumidza sezvazvakangoita. Vanofanira kuramba vachikurudzira kuti vaone kana pane chero chipi nechipi chekutsvaga kwepaiti yavo, mhinduro, kubhadhara, email reset Zvimwe zvakasiyana-siyana zvinopa mharidzo yevaya rubatsiro rwekushandurwa kusingadziviriki kweFPMailer Chii chiri kunyanya kufunga kuti Anogona kurwisa anogona kuziva avo vanoendesa tsamba ye email.
Pamusoro pavo vanoshandisa zvinhu zvinotungamirirwa nehutori izvo zvinowedzera kukurudzira kuisa webhusaiti yebatsiro rewebsite paunoona kana yakagadziriswa pamwe chete nechekugadzirisa kwayo. Mushure mezvo ivo vanofanira kubhadhara avo vanoenda kune chero ipi zvayo Pane chero chetatu-party plug-ins alternately modules iyo inoda kuiswa Uye iyo inogona kushandisa PHPMailer pachavo.